Somalia: "Waan la sii hadleynaa Somaliland"Wasiir Odaawaa
Home Somali News Somalia: “Waan la sii hadleynaa Somaliland”Wasiir Odaawaa
Wasiir Odawaa ayaa sheegay in wada hadalka uu mar walba yahay jidka kaliya ee u furan Soomaalida, waxaana uu rajo ka muujiyo in wixii tabasho ee jira la xalin karo.
“Wada hadalku mar walba waa jidka kaliya ee u furan umadda Soomaaliyee, waxaan aamminsannahay inaad wada hadli karno, hal Soomaaliya ayaa jirta laakin waan kala aragti duwannahay”ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Gudaha oo ka hadlayay barnaamij dood ah oo ka baxayay warbaahinta dowladda shalay oo jimco aheyd.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay aamminsan tahay in la wada hadli karo, sidaas darteedna aan loo baahnayn in cid kale ay dhex dhexaadiso dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland.
“Inaan wada hadalno ayaanba diyaar u nahaye dadka kale maxaa loogu baahan yahay” ayuu yiri Wasiirka oo ka jawaabayay su’aal laga soo weydiiyay wada hadalka Somaliland iyo shuruuda ay ku xireen inay la fariistaan dowladda Soomaaliya.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Su’aashaas waxay u baahan tahay jawaab, Wadahadalka marka aad diiddo ayaa waxaa la yiraahdaa qofka gogosha hala soo galiyo…aan wada hadalno, waan ku heshiin karnaa waxa naga dhaxeeyo”
Wasiirka Arrimaha Dibada Somaliland Biixi ayaa dhowaan sheegay in aanay la fariisaneyn dowladda Soomaaliya ilaa Beesha Caalamka ay goob joog ka noqoto oo labada dhinac ay dhex dhexaadineyso, isagoo ku eedeeyay inay mas’uul ka aheyd bur burkii wada hadaladii Istanbul.
Horaantii bishan ayay aheyd markii uu bur buray wada hadal Istanbul ku dhex maraa wafuud ka kala socotay dowladda Soomaaliya iyo Maamulka Somaliland, inkastoo wafdigii ka socday Somaliland ay diideen inay soo hor fariistaan qaar ka mid ah wafdigii matalayay dowladda Soomaaliya oo ay sheegeen inay deegaanadooda ka soo jeedaan.